Ahoana ny habetsaky ny ezaka amin'ny varotra ivelany? | Martech Zone
Ahoana ny habetsaky ny ezaka amin'ny varotra ivelany?
Talata, Febroary 24, 2015 Douglas Karr
Matetika tsy jerentsika ireo fotoana mety hivarotana izay hita be loatra ka tsy mandeha iray andro isika raha tsy mahita azy ireo. Ny marketing ivelany amin'ny takelaka fanaovana bileta dia iray amin'ireo paikady ireo. Toy ny ankamaroan'ny fantsom-barotra, misy tetika manokana sy fotoana mety amin'ny marketing amin'ny takelaka izay tsy azon'ny hafa omena. Ary nanome tetika lehibe, ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola dia mety hihoatra ny fantsom-barotra hafa.
Ny takelaka takelaka dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny orinasa amin'ny indostria rehetra. Amin'ity sary ity avy amin'ny Signarama any Toronto, nahaliana manokana ny namaky fa ao amin'ny indostrian'ny Telecom no tena manana ny lanjany. Fanamarihana: mahafinaritra ihany koa ny mahita fa ny orinasan-tsonia dia mahatsapa ny fiantraikan'ny infografika!
Signarama dia manome lakilen'ny fahombiazana telo amin'ny ezaky ny marketing ivelany:
Toerana mety - Farito ny tsenanao lasibatra, fantaro ny demografika kendrenao, ary mifantoha amin'ireo faritra misy ny demografika lehibe indrindra.
Hafatra marina - Ny fandefasana hafatra faran'izay hita maso sy fohy dia manakiana. Andramo nomerika ny hafatrao hahitanao ilay manana taha ambony fanovana lehibe kokoa alohan'ny hividianana doka ivelany.
Làlana mankany amin'ny fiovam-po - Tsy diso mihitsy izany fa, na inona na inona fantsona resahintsika, dia gaga foana isika amin'ny isan'ny fampielezan-kevitra izay tsy misy fepetra fiantsoana azo refesina Ny marketing billboard dia tsy mitovy ankehitriny! Manambatra hafatra tsy manam-paharoa amin'ny toerana tokana miaraka amina pejin-tsambo tokana amin'ny URL tsotra izay takona amin'ny motera fikarohana.
Tags: marketing amin'ny takelakapeta-drindrinadokambarotra fijanonana busdoka amin'ny fiaratabilao varingarinagorodona saryjiro megamarketing any ivelanydokambarotra ivelanymarketing any ivelanysignage ivelanyafisyracquerssignagefamantaranadoka amin'ny rindrina
Webtrends dia mandefa ny fahitana data lehibe amin'ny Webtrends explore
23 Aogositra 2015 amin'ny 11:37 PM
Infographic mahafinaritra. Raha eo amin'ny lafiny marketing ny orinasa eo an-toerana dia mandeha tsara ny takelaby sy ny mpanao dokam-barotra any ivelany. Indraindray ny mpijery dia miforitra tsy misy fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny takelaka takelaka hitan'izy ireo eo afovoany. Na eo aza izany, ny takelaka fanaovana dokam-barotra - na ny mpampita dokam-barotra - dia tokony handrisika olona handrisika ny valiny!